Google ၏ Search Features များ - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Google ၏ Search Features များ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on December 21, 2011 at 10:39am
ကမ္ဘာကျော် Search Engin ကြီး တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Google ဟာ သူ့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုတဲ့သူတွေ အတွက် တစ်နည်းအားဖြင့် သူ့ရဲ့ Search Box မှာ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေနေသူတွေ အတွက် အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မယ့် Features တွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့က အခုအချိန် အမေရိကန်မှာ ဘယ်အချိန်လောက် ရှိနေပြီလဲ၊ စင်ကာပူမှာ ဘယ်အချိန်လောက် ရှိနေပြီလဲ ဆိုတာကို သိချင်တယ် ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် Google မှာ time US, time Singapore စသည်ဖြင့် ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့တင် Google က သူ့ရဲ့ Search ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ အဲဒီ နိုင်ငံတွေရဲ့ အချိန်ကို ဖော်ပြ ပေးပါလိမ့်မယ်။
Google ရဲ့ Search Features တွေကို https://www.google.com/intl/en/help/features.html မှာ သွားရောက် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အဲဒီ Search Features တွေထဲက အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Google ကို Calculator တစ်ခုအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Google ရဲ့ Search Box မှာ2+3လို့ ရိုက်ထည့် ကြည့်လိုက်ပါ။ Google က2+3=5ဆိုပြီး အဖြေ ပြန်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတော့ အလွယ်ကူဆုံး သင်္ချာ အဖြေတစ်ခုကို ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက် ခက်ခဲတဲ့ ဂဏန်း၊ သင်္ချာ ရလဒ်များကိုလည်း Google က တိကျ မှန်ကန်စွာ အဖြေထုတ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
Google Currency Coversion
စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘယ်လောက် ပေါက်ဈေးရှိသလဲ သိချင်ပါသလား ? အဲဒီ ပေါက်ဈေးကို ဘယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ သွားကြည့်ရမှာလဲ ? ဒီအတွက် Google က သူ့ရဲ့ User တွေကို မပင်ပန်းရအောင်လို့ ကူညီပေးထားပါတယ်။ Google ရဲ့ Search Box မှာ 100 SGD in USD လို့သာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ Google က စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာရဲ့ ပေါက်ဈေးကို ဖော်ပြ ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ငွေကြေးကို MMK လို့ အတိုကောက် သုံးပါတယ်။ အရင် Burma အနေနဲ့ တုန်းက BUK လို့ သုံးပါတယ်။ (ကျွန်တော် စမ်းကြည့်တာတော့ Google ရဲ့ Search Result မှာ MMK ကို အခြား ငွေကြေးလို တိုက်ရိုက် ဖော်ပြပေးခြင်း မရှိပါဘူး။) ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရဲ့ ငွေကြေး အတိုကောက် စာလုံးများကို ဒီ post ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ World Currencies ဆိုပြီး စုစည်း ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ asknumbers.com ကနေ ယူ၍ ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၅ လက်မမှာ cm အနေနဲ့ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ...? ၃ မိုင်မှာ centimeters ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ...? ဒါတွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ဖို့ အတွက်လည်း Google က သူ့ရဲ့ Search Features မှာ Unit Conversion ကို ထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။
Google ကို Dictionary တစ်ခု အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Search Box မှာ Zoo လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါက Google က Zoo ရဲ့ Definition အချို့ကို ဖော်ပြ ပေးမှာဖြစ်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိချင်သူတွေအတွက်လည်း More Info ဆိုတဲ့ လင့်များကို ပေးထားပါသေးတယ်။
Google Sports Scores
အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်က မန်ယူ အသင်းရဲ့ နောက်ဆုံး ကန်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ရလဒ်ကို သိချင်တယ် ဆိုရင်လည်း Google က ကူညီပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ Man Utd လို့သာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ Search Results တွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ မန်ယူအသင်းရဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ် ရလဒ်ကို ဖော်ပြ ပေးပါလိမ့်မယ်။ Google မှာ ကိုယ် သိချင်တဲ့ အသင်းနာမည်၊ တင်းနစ် အားကစား ဆိုရင်တော့ လူနာမည် ပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီ နာမည်ကို ရိုက်ထည့် လိုက်တာနဲ့ နောက်ဆုံး ကစားသွားတဲ့ ပွဲစဉ် ရလဒ်ကို ဖော်ပြ ပေးပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း စတဲ့ အချက်တွေကို လွယ်လင့်တကူ သိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း Google က လုပ်ဆောင် ပေးထားပါသေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံ၊ ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်ရဲ့ လူဦးရေကို သိချင်တယ်ဆိုရင် Google Search Bar မှာ population FL လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်ရဲ့ လူဦးရေဟာ ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက်အထိ ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာကို Google က ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
Google Sunrise & Sunset
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ မြို့တစ်မြို့ရဲ့ နေထွက်ချိန်၊ နေဝင်ချိန်တွေကို ကိုလည်း Google မှာ ကြည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နေထွက်ချိန်ဟာ ဘယ်အချိန်လဲ ဆိုတာကို Google မှာ ရှာကြည့်ချင်ရင် sunrise Yangon လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာရုံပါပဲ။ Google search ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နေထွက်မယ့် အချိန်ကို ပြပေးမယ့် အပြင် နေထွက်ဖို့ နောက်ထပ် နာရီ ဘယ်လောက် လိုသေးတယ် ဆိုတာကိုပါ ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ နေဝင်ချိန်ဆိုရင်လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ sunrise နေရာမှာ sunset ဆိုတာကို ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ။
ဒီနေ့ နေသာမလား? မိုးအုံ့မလား ? မိုးရွာမလား ? ဒီလို မိုးလေဝသ အခြေအနေတွေကိုလည်း Google မှာ ရှာလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ Weather Yangon, Myanmar လို့ Google Search Bar မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါက Google က search results ရဲ့ ထပ်ဆုံးမှာ Yangon မြို့ရဲ့ ရာသီဥတု အခြေအနေကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
Afghanistan Afghanis - AFN Albania Leke - ALL
* Absolute and replaced with EURO
Post by Anzartone (http://anzartone.22web.net) Views: 522
Tags: Anzartone, Google Like2members like this
Comment by Wai Wai on December 22, 2011 at 12:44pm thanks. RSS